ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री बन्ने, अरु को–को जाने भए ? – Setosurya
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रबाट महासचिव ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर सरकारमा ल्याउने भएका छन् । पोखरेलसँगै सचिव प्रदिप ज्ञवालीपनि सरकारमा जाने भएका छन् ।
ज्ञवाली परराष्ट्र वा सञ्चारमध्ये एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरि सहभागी हुँदैछन् । २ नम्बर प्रदेशबाट एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रघुवीर महासेठ पनि सहभागी हुने भएका छन् । सचिव योगेश भट्टराईपनि सहभागी हुने चर्चा छ । त्यस्तै महिलाबाट पद्मा अर्यालको पनि नाम चर्चामा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेसंगै मन्त्री बन्नका लागि नेताहरुले दौडधुप सुरु गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएसंगै ओलीले एमालेबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाएका थिए ।
के होला भरतपुर मतपत्र प्रकरण ? सुनुवाई आज
सभामुखको एउटा सिफारिस अध्ययन गर्न राष्ट्रपतिलाई ५ महिना !